Ukuqonda izivakalisi zezifundo ngesiNgesi
Isivakalisi esisetyenziswe njengesihloko sesigatshana okanye njengesihloko siyancedisa ngelixa isigama sesigxina sisesigxina (okanye sokutyunjwa).
Izibhengezo zezifundo ngesiNgesi yimi , wena, yena, yena, thina, bona, ngubani, nabani na. (Qaphela ukuba wena, yona , kwaye yintoni esebenzayo njengezenzibizo zento .)
"'Ngoko ke,' watsho uLorax,
'-nceda uxolele ukukhwehlela kwam -
abakwazi ukuhlala apha.
Ngoko ndiyabathumela. "
(UDkt Seuss, i -Lorax .Random House, 1971)
"Umama wamfundisa u-Prim ukuba sidle ngokufanelekileyo, ngoko ke, ndiyakwazi ukuphatha iforki kunye nomese."
(USuzanne Collins, iMidlalo yokulamba .), I-2008)
"I- Gray's Anatomy yinto enye into endingavumelana nayo. Sasibabethwa ngumboniso wezokwelapha, kwaye sasidumekile ngenxa yokuzinikela kwethu kunye nokukhathalela."
(James Patterson, i- Double Cross .
" Ndiya kulala phezu kombhede wakhe. " Akufanele ndifunde phezu kwehlombe lakhe ngenxa yokuba ndifunda ngokukhawuleza kunokuba akwenzayo, kwaye uyamcaphukisa xa ndifika ekupheleni kwephepha kwaye ndikhangele kwaye ndilinde ukuba awuguqule. "
(ULaura Moriarty, Isiko Sezinto Zonke . Hyperion, 2003)
" Mina noBaley sasihamba phantsi kwimizila yeengulube, kwaye simi kwiindawo zokuqala zocingo sazithela phantsi iingubo ezingabonakaliyo kwiindawo zokubonga zethu. Ndisoloko ndigxeke impendulo kuphela kwisiqingatha kwisithakazelo. "
"Njengoko uHerman washiya i-Weber's Café iintsuku ezimbalwa emva koko, wabona amakhwenkwe amabhinqa ecaleni ngaphesheya kwendlela, ekhangela kuye.Wahamba waya eKrkestræde, kwaye bamlandela endleleni.
(UCarsten Jensen, We, oTyiweyo , usuka kwiDenmark nguCharlotte Barslund no-Emma Ryder.Hoffon Mifflin Harcourt, ngo-2011)
" Sasiphumile enye yeentambo zethu zokuhlwaya, uHolmes kunye nam , kwaye sabuyile malunga nesithandathu ngehora ebanda, kubusika busika ebusika ....
Ndathi: " Ngubani na?
"'Indoda engowona mkhulu eLondon,' uHolmes waphendula, njengoko ehleli phantsi wolulela imilenze ngaphambi komlilo.
"' Ngubani na?'
"Ndiza kukuxelela, uWatson. Ungumkani wabo bonke abaxhasi."
(Sir Arthur Conan Doyle, "I-Adventure yeCharles Augustus Milverton." Ukubuya kweSherlock Holmes , ngo-1904)
Iingcebiso zokusebenzisa: mna okanye mna ?
"Isibhengezo sesigama mna kunye nento into yokuba ndizithetha ngamanye amaxesha ndididekile kwiintetho ezingaqhelekanga , ngokukodwa kwiibinzana kum kunye naphakathi kwakho nawe .
"Emva kwamagama kunye neziphakamiso, into yesitemela kufuneka isetyenziswe; phambi kweentsenzi, isigama sesigxina kufuneka sisetyenziswe ... Umhlobo wam kunye nam [akunjalo] uya kunceda . unike impendulo engcono kunoko mna kunye nabahlobo bam bahloniphekileyo (kuthe ngethuba loMbuzo weNkulumbuso kaMongameli).
"Ezi ngxaki azikho nto xa i-pronouns ihlala yodwa; nayiphi na idideko ingasombululwa ngokususa ngengqondo enye into ethile kwaye ihlolisise umphumo: ... Ndiza kunceda .
"Isenzi isenzo, ngokwemigaqo yesigama, yinto engafanelekanga: kwimiqathango esemthethweni Ndingamkelekanga kubasebenzisi abancinci, abakhetha ukuba NguNdikhoyo . Noko ke, kwiimeko ezingaqhelekanga idiodatic engokwemvelo kunokuba i-pedantic Ndinguye kwaye yamkelekile kubasebenzisi abaninzi. " (UMartin Manser, Isikhokelo seLizwi elilungileyo , ngo-6 we-Bloomsbury, ngo-2011)
Iimpawu zoLwimi emva kokuthelekiswa
"Xa umhlathi wesibini unomxholo wesigama kunye nesenzi sesigatshana sishiyiweyo, kukho umba wefowuni." Umzekelo, cinga (24) Ukuba ngaba, kufakwe kwisivakalisi esifanisa (24a) ) isusiwe, isigama sesigidimi ndihlala nditshintsha kwinto yesigama sam , njengoko ku (24b). Ngokwemigaqo ye- prescriptivist , isimemezelo simele sihlale njengathi (24c), kodwa ngentetho ifomu yesigama esichaza kakhulu .
(24a) Umdala kunami .
(24b) Mdala kunam.
(24c) Umdala kunami. "
(URon Cowan, Igrama yoLwimi lwesiNgesi: iNcwadi yeNkalo kunye neKhokelo soKhuseleko . IChamridge University Press, 2008)
Isalathisi segrama (GM)
Ukubhalwa kwezoBhishino: IiNcwadi zoBango
Imithombo Yecandelo Lophando
Inkcazo kunye neMimiselo yeRhetoric Epicicic
Ngokuphindaphindiweyo kabini (igrama)
INtaba iKosciuszko: Iphakamileyo ephakamileyo e-Australia
Ama-50 amaninzi aphantsi koMculo
Izinto Ezilishumi Ongazange Uzazi Ngelizwe leMifanekiso yokuThola
12 Iikholeji ze-Intanethi zokwakha Ubuntu bengqondo
Oko Ukwenza Ukuba Imoto Yakho KuMkhukula
Imvelaphi, iMbali, kunye neNtshutshiso yeSoka
Iingoma ezi-10 ezigqwesileyo zee-rap ze-Rap
I-Weather Watch kunye neSilumkiso kunye neNgcebiso
Iingingqi ezi-5 zoQoqosho
I-Folk Music ihluke njani kwilizwe?
Ibali leRodeo Legend Charmayne James